Uma isendalini khona styler Babyliss, izibuyekezo mayelana namakhono awo ngokwalo ekudaleni zezinwele wabonakala ngesikhathi esisodwa. Ziziningi futhi ngokuvamile omuhle. Lokhu kungenxa izici eziningi, ikakhulukazi yokuthi idivayisi ergonomically yakhelwe nge ipeni, kuphephile ngenxa yokubakhona imodi yokulala (cisha emva kwemizuzu amabili) futhi othomathikhi livaleke-off ngemva kwehora elilodwa.
Styler Babyliss. Uphenyo Ezokuphepha
Inqubo izinwele curling kwenzeka kwelinye lamakamelo zivalekile eyenziwe zobumba nge enamathela plastic izinga eliphezulu kakhulu. Lokhu kungabi sengxenyeni ukulimala kweminwe kanye izandla, okuyinto usebenzisa ezinye ploek sihluke Babyliss ukoma. Izibuyekezo ngalokhu imishini mini izinwele abonisa nokusimama njengoba styler kuhla amandla kancane futhi ukuphila isikhathi eside (amahora afika ku-ayizinkulungwane eziyishumi curling). Ngaphezu kwalokho, enamathela Ceramic ekamelweni ukusebenza evumela ukuthola izinwele nokunwebeka nge sheen silky futhi ngaphandle creases, okuyinto ebaluleke for imiphumela elilungile. Ubude ezinconyiwe izinwele - akukho kuka 0.65 metres igagasi kusukela ezimpandeni. Kufanele kuqashelwe, abesifazane zithi curls izinwele ngezansi izindwani ehlombe kakade etholwe ngokwanele side.
Uma uqale ukusebenzisa Babyliss Pro ukoma, izibuyekezo oyisebenzisayo abanolwazi ingakusiza wenze yonke into eqondile futhi sizuze kwekhanda ephelele. Okokuqala, udinga ukukhetha omunye lokushisa izindlela ezintathu: 190, 210 noma 230 degrees Celsius (I-anemibala, evamile futhi obukhulu izinwele izinhlobo, ngokulandelana). Ngokuvamile amantombazane wabhala ukuthi bakhetha Ukushisa ongatheni, okuvumela ukuba Ubuningi bamahora ukulondoloza impilo izinwele nge umphumela omuhle.
izinzuzo eziningi zedivayisi
Okwesibili, styler Babyliss, ukubuyekezwa ezingafinyelela wobulili fair has wonke amazwekazi, kwenza kube nokwenzeka ukoma le ngokwewashi izinwele, esiphikisa, noma kumodi othomathikhi. Abesifazane bavame ukukhetha "okuzenzakalelayo", okuyinto wenza sikwazi ukuthola curls multi Ohlangothi.
Okwesithathu, kumelwe sikhumbule ukuthi ngensimbi curling izinwele anoma yibuphi ubude, kodwa ukushuba Kunconywa okhiye isango ngeke sidlule ezintathu (izinwele esihle - emihlanu) ngamasentimitha. Ngingakwazi ukusebenzisa i ezisontekile futhi mihlobiso Babyliss Pro Ngenze Amaphutha? Izibuyekezo kanye nesiyalo kudivayisi bathi imisebenzi enjalo zingenzeka futhi unike umphumela ukukhanya yemvelo bushelelezi amagagasi amancane.
Yimaphi amanye amathuba owenza ngensimbi curling Babyliss Pro? Izibuyekezo abonisa ukuthi imishini has a amasignali umsindo, esiyisixwayiso ekupheleni kwesikhathi curling.
Ilokhi Ideal ngemizuzwana eziyishumi
Ngo inqubo laying bangakhetha imodi eyisishiyagalombili, eziyishumi noma nambili imizuzwana, kuye ngokuthi uhlobo olunjani Perm liyadingeka. Imodi Vosmisekundny (ezintathu imisindo) inika wave elithambile, (amasignali amane) eziyishumi - izinwele ukukhanya, futhi imizuzwana kweshumi (amasignali emihlanu) kungaba Kuvunguza ngempela emaweni. Konke kuncike izici ngamunye izinwele kanye nemithombo ehlobene esetshenziswa.
Kungani kungenzeka ukusebenzisa imikhiqizo isitayela usebenzisa Babyliss Pro? umbiko Izibuyekezo okwakuhlanganisa imishini has ibhulashi ekhethekile elikuvumela ukuhlanza ikhamera laying we-plaque esakha lapho, uma uboya has a Foam, mousse noma lacquer. Lokhu kukuvumela ukuba ugcine okushisa edingekayo phakathi nokuhlinzwa okwalandela futhi akusho nesisindo phansi izinwele zakho izingxenye extra. Futhi, kudingeka ufunde ukuthi kufanele awubambe kanjani idivayisi ngendlela ethile ukuthi intuitively eyatholakala kusukela Yilowo nalowo muntu wesifazane emva isipiliyoni kuqala ne styler.
Kanjani styler izinwele isitayela?
Ngaphambi kokusebenzisa umshini for curling Babyliss, ukubuyekezwa zazo ifakazela izinga okusezingeni wezinsimbi zomculo, udinga ukuxhuma kwi-grid kagesi, uklanyelwe 220 volts. Isibambo okudingekayo ukuze usethe izinga lokushisa oyifunayo, isikhathi oyifunayo futhi igagasi isiqondiso, bese ulinda kuze kunikezwe uphawu lokuthi ukukhanya eyeka agqoke (okusho ukuthi curling sekuqala ukufudumala). Khona-ke kudingeka uhlukanise curls bese ukhetha indawo bamba. Idivayisi ine ujikelezisa intambo ubude 2.7 amamitha, okuyinto wenza sikwazi ukwenza engatholwa wekugcina, ehlanganisa uboya ngemuva ekhanda. Vula ingxenye curling Irons ukugcina isiqondiso ikhanda, ukubeka ukukhiya singene inkatho avale styler lize ukuchofozwa. Khona-ke udinga ukulalela umsindo Babyliss Pro. Izibuyekezo abonisa saziso ukuvulwa ithiphu esebenzisa ukukhulula zinyakaze ngemva curling kuqedile, sengathi nje donsa, kuyoba nokuguquguquka angabe esakwazi nokunwebeka zayo. Ngaphezu kwalokho, kutuswa ukuba ulinde kuze zinyakaze kuphole phambi kwakhe ukuqhuba zokukhwabanisa eminye, isibonelo, lacquer nenkanuko edlulele.
Styler ivumela zezinwele esazo zonke umuntu
Akuyona imfihlo ukuthi uhlobo haircuts noma isitayela kungayandisa kakhulu ukushintsha ukubukeka owesifazane futhi umbono wakhe kwabanye. Njengoba kulokhu, kungasiza ukuhlala uthokomale ufunde Babyliss Pro? Izibuyekezo wochwepheshe basikisela ukuthi udinga nje ukuthola iphuzu kwesokudla izicelo Iyunithi lasekhanda.
It kunoma isiphi isimo kuyodingeka ukubeka sihlehliswe 3 cm kusukela ezimpandeni, kusukela styler sigubhu heats ngempela kakhulu, kodwa akabi. Kodwa phansi iphuzu isikhundla kuncike isitayela ekhethiwe. Ngokwesibonelo, abesifazane kanye okweqanda, side ubuso ezicashile njengoba Julia Roberts, izinwele kudingeka zimiswe cishe maphakathi yasebunzini, okuzokwenza zibukeke unciphise emigqeni mpo ebusweni.
Kungenzeka yini ukuba ulungise round ubuso nge Babyliss Perfect ukoma? Izibuyekezo amantombazane nge ezifana uhlobo ukubukeka babike ukuthi bakwazi ukuthola umphumela omuhle uma kuheleza kudivayisi umkhosi izihlathi noma ukwakha izinwele esithambile kakhulu futhi ukukhanya (ezingeni lokushisa 190 degrees) kusukela phezulu ukuthi uyazifihla ukugcwala ngokweqile izihlathi.
Demi Mur futhi Holli Berri. Izici pilings
Styler lusebenza kahle futhi styling esingunxantathu futhi ubuso sikwele. Esimweni sokuqala-ke bakha ikhanda obukhulu curls nokuphakamisa amashiya, okwesibili uma curling iphuzu izinhlelo zokusebenza kumele kube endaweni ngezansi nje izindlebe. Isibonelo nokupakisha ezithambile kuleli cala, kungaba izinwele Demi Mur, izinwele ezimnyama kabani eside ngokuvamile phama curls side, kuhlangene umqhele bushelelezi futhi sokuvalelisa. Lokhu isitayela isibe isithonjana isitayela abaningi balingisa Brunette wakhe.
Abesifazane kanye uhlobo idayimane lomuntu, njengo Holli Berri futhi bangase bafinyelele i ukubukeka ekhangayo usebenzisa idivayisi Babyliss. Izibuyekezo abalandeli abonisa ukuthi Holly wabheka emihle nje kubekwa ringlets ezakhiwe izihlathi. Lokhu kwavumela ukuba "ukususa" emagumbini ebukhali emhlathini ukuthambisa kwesilevu athuthukile, isici zalolu hlobo. Kungenzeka ukuthi wochwepheshe udumo ukusebenzisa curling Marco "Bebiliss".
Amadivayisi yalolu hlobo izoba ukudayiswa, londoloza isikhathi esiningi, amantombazane emhlabeni wonke kusukela ngesikhathi isitayela izinwele ubude aphakathi nendawo kanye ukushuba ithatha cishe ingxenye yesithathu yabantu ihora nge ngomzamo omncane kakhulu. Yiqiniso, ezincane curls ku izinwele ezinde kufanele adale eside, kodwa inqubo styler kuyoba kusheshe futhi kube lula kunalokho nge ngefaskamu ezivamile futhi curling izinyawo ngeketanga. Abesifazane nezingane bayakujabulela ukusebenzisa idivayisi ukuba kungabi yiwo wodwa kodwa futhi abangane (ngaleyo ndlela ekwandiseni indilinga labangane), futhi ukudala zezinwele samaholide ngoba ozinikezele kancane.
Lena sibonga kungenzeka yokuthi kudivayisi ukuhlala uthokomale ufunde efanelekayo intsha, njengoba eChina ifektri indlela, futhi nabathengisi seqiniso unazo zonke izitifiketi kudivayisi yasekuqaleni Babyliss. Uphenyo inani lelo ungathenga lokhu imishini mini izinwele, zahlukahlukene ngempela. Konke kuncike endaweni sokuthenga.
Ithengwa kanjani i styler ezishibhile?
Lapho ukuthenga imoto ukuze wave esitolo okungaxhunyiwe ku-intanethi intengo kungaba njengoba eliphezulu ruble ayizigidi ezinhlanu njengakulolu amaphuzu yedivayisi yokuthengisa yalolu hlobo ngokuvamile isikhala kuqashwa nezindleko ezengeziwe (kwabasebenzi, ukuphepha, ugesi uBill, njll ..), Yikuphi abekwa emalini. amanani ahlukene kakhulu, ungathola lo curling ukuba esigcawini kwenethiwekhi, lapho idivaysi ahlinzekwa ngamanani abaneminyaka esukela kwemibili nengxenye - izinkulungwane ezintathu. Kulokhu-ke kubalulekile ukuba sibheke idumela kanye ukuba khona kwezimangaliso eside e-esitolo, njengoba namuhla ngisho counterfeited izimpahla Chinese ukuthi iyaphumelela futhi funa. Ukuze ukubuyekezwa, zikhona izimo lapho intombazane yalungiswa amadivayisi engabizi kokuba ezinye izici kuka inguqulo yasekuqaleni. ukungabi Met lokushisa phansi 190 degrees, okuyinto kakhulu ngokucophelela iphathelene izinwele noma kuwo wonke amadivayisi zazhevyvayuschie izinwele (styler angempela unikezwe umsebenzi ukuphepha).
Ngingakusebenzisa kanjani lokhu kudivayisi njalo?
Ngakho-ke, ukonga on ubuhle kufanele babe abalinganiselayo, kusukela sivala kusheshe lempangweni, futhi ekusimameni kuzothatha isikhathi esiningi noma, noma kungaba yizindleko ezinkulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ngaso sonke isikhathi ukuthi libuyisele emuva izimpahla kubaphakeli abonakele futhi ubuyele imali wachitha.
Kufanele futhi acabangele iqiniso lokuthi styler, naphezu Ceramic zavivochny sigubhu nemibuso ekhethekile, namanje yidivayisi ephezulu lokushisa. Ngakho-ke, engathandeki ukuyisebenzisa nsuku zonke, ngoba ungakwazi wome izinwele, futhi naba buthuntu futhi ziyaqothuka. Uma ukustaka kuyadingeka nsukuzonke, kubalulekile ukuba sisebenzise amathuluzi ngoba izinwele nokubuyiselwa, kuhlanganise buso, amashampu akhethekile amafutha ngcono isimo izinwele kanye nokuqinisa follicle izinwele. Idivayisi okhokhela okusezingeni eliphezulu ngempela izinga izingidi, kodwa munye kuphela, uhlobo Kuvunguza. Ukuze uthole ezinye izinhlobo packings (ezifana "yezwakala") zidinga ezinye amafoni kanye namadivayisi. Kuyadingeka ukuba acabangele lapho uthenga.
Yesikhathi eside izinwele styling izinwele naphakathi: Funda Iqiniso!
E202 uyakulondoloza futhi E211 - izici eziyisisekelo ukusetshenziswa